Mpekere oroma kpọrọ nkụ iji chọọ ihe ịchọ mma | Crafts On
Ihicha iberibe oroma iji mee ihe ịchọ mma
Jenny monge | 28/09/2021 10:00 | .Chọ Mma, Crafts, Nzughari
Ndewo onye obula! Na nka nke taa anyi ga ahu otú mfe nkụ Mpekere oroma ma ọ bụ mgbacha oroma iji nwee ike ịme ihe ịchọ mma n'oge mgbụsị akwụkwọ. Enwere ike iji ya mee kandụl ma ọ bụ ihe etiti.
1 Akụrụngwa nke anyị ga -eji kpoo oroma anyị
Akụrụngwa nke anyị ga -eji kpoo oroma anyị
Oroma, ka ị nwere ike dabara na tray oven.
Mpempe akwụkwọ na akwụkwọ
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ bee oranges n'ime mpekere. Mpekere ndị ahụ ekwesịghị ịdị gịrịgịrị n'ihi na ha nwere ike ịgba ngwa ngwa. I nwekwara ike iji peelings oroma mana na -eburu n'uche na iberibe ndị a ga -ejikwa na ha anaghị agba ọkụ.
Anyị na-etinye Nri na oven na ogo 200 ka ọ na -ekpokwu ọkụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị na -etinye akwụkwọ na tray achịcha ma anyị na -ekesa mpekere niile nke ọma ka ha ghara imetụ ibe ha aka nke ukwuu na ha niile nwere ike kpọnwụọ n'enweghị nsogbu, na mgbakwunye na inwe ike ịchịkwa ma ọ bụrụ na ha kpọọ ọkụ.
anyị ga-aga ịhụ na ha anaghị ere ọkụ. Mgbe obere oge gafere, anyị ga -atụgharị ha. Ọdịdị nke oroma kwesịrị ịbụ nke mkpụrụ osisi a mịrị amị.
Mgbe ọ dị ka nke a, gbanyụọ oven ma hapụ ya ka ọ zuo ike n'ime obere oge tupu iwepu tray na bufee mpekere ndị ahụ na akwa waya ka ha nwee ike ịjụ oyi n'ụzọ dị mfe n'emeghị alụlụ nke na -eme ka mpekere oroma ahụ dị nro.
Ozugbo oyi anyị nwere ike chekwaa ha na akpa akwụkwọ ma ọ bụ jiri ya ozugbo icho mma kandụl, ihe etiti, okpu mara mma, icho mma ihe ụtọ, wdg ...
Na njikere! Ị nwere ike iji otu usoro a na ụdị mkpụrụ osisi ndị ọzọ dị ka lemons, mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi, limes, wdg ... gbalịa hụ nke masịrị gị.
Enwere m olileanya na ị ga -anụrị ma mee nka nka iji chọọ ụlọ gị mma na mbata mgbụsị akwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Ihicha iberibe oroma iji mee ihe ịchọ mma
Nka na -egwuri egwu n'ụlọ na ụmụaka nọ n'ụlọ